Kyeemite ဟီးတိုက်သောနေ့တစ်နေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Best Web Awards » Kyeemite ဟီးတိုက်သောနေ့တစ်နေ့	40
Posted by အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် on Jul 24, 2013 in Best Web Awards, Celebrity, Entertainment, Myanmar Gazette, Photography | 40 comments
တွေ.ဆုံပွဲ နှင့် ဆုပေးပွဲ...
ဟီးတိုက်တဲ့ကြီးမိုက်ကို ဆီးမရိုက်ဖို့တော့အရင်တောင်းပန်ထားပါရစေ.. အခုရက်ပိုင်းတက်လာတဲ့တွေ့ဆုံပွဲပို့စ်လေးတွေတွေ့တော့…
ဒီတစ်ခေါက်တွေ့ဆုံပွဲက တက်ရောက်သူနဲပေမဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံးနဲ့ ပျော်စရာကောင်းခဲ့သလိုအစားအသောက်ကလည်း
မိတ်ဆက်လိုက်အုံးမယ်…(အစားသိပ်မမက်တဲ့ ဒေါ်ခိုင်ဇာက ကွန်မန့်တစ်ခုမှာ ဘူဖေးပုံဘယ်သူ့မှရိုက်မလာဘူးလားဆိုလို့
ကျုပ်ကလည်း အဲဒီနေ့က ကိုယ့်ဖာသာဘာတွေလုပ်နေခဲ့မိမှန်းတောင်မသိပါဘူး
အခုပုံလေးတွေက ဖုန်းကင်မရာနဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံအချို့ပါ…
ဒါကတော့ ဧည့်ကြိုကောင်တာနား ချိတ်ထားတဲ့ ပထမအကြိမ်ကအမှတ်တရဗွီနိုင်းပါ
ဒါလေးက စာအုပ်စီစဉ်သူရွာသူချောရဲ့ အမှတ်တရ ရေးဟန်
“ကြီးမိုက်တစ်ယောက် တဟဲဟဲနဲ့ ဟီးတိုက်လွန်းလို့ သွားတောင်အအေးပတ်သွားကြောင်းပါဗျာ”
Myo Thant says: ကိုမိုက်ရယ်
ထိပ်ဆုံးလူသားတွေဖြစ်ကုန်ပြီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: ဟုတ်တယ်လေ ကိုမျိုးရဲ့
ဘူဖေးဖွင့်လှစ်ပေးသူ သားအဖအဖြစ်ဂုဏ်ယူလိုက်စမ်းပါဗျာ.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 236
Green Rose says: ဦးကြီးမိုက်ရေ…
အမှန်တော့ အဲဒီ့နေ့က အဲဒီ့ဘူဖေးစားပွဲနား အရင်ဆုံးရောက်တာ Green Rose နဲ့ နောက်တစ်ယောက်သိလား…
အစားအသောက်တွေ မရောက်ခင်ကတည်းက ရောက်ပြီလားလို့ သွားသွားကြည့်တာ ၄-၅ ခေါက်လောက်….
အဲဒီ့ထဲမှာမှ ဗိုက်ဆာတာကို လူမသိသိအောင် အော်နေတဲ့လူက ရှိသေးတယ်။ (ဘယ်သူလဲလို့ တော့မမေးနဲ့ ပြောဘူး… ဒါပေမယ့် ကာယကံရှင်က မပြောရင်ပြောပြမယ်)..
တကယ်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ပွဲပါ။ လာတဲ့သူနည်းလို့ ပွဲစီစဉ်သူတွေကို အားနာစိတ်ဝင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုဝိုင်းကူး၊ ဒီဝိုင်းကူး.. ကိုယ့်စာအုပ် ၊ သူ့စာအုပ်၊ လူကြုံပါးတဲ့ စာအုပ်တွေကို လက်မှတ်ထိုးကြ၊ စကားတွေပြောကြနဲ့ ပထမအကြိမ်ကထက် ပိုပျော်ဖို့ကောင်း ပါတယ်။
ရွှေတိုက်စိုး says: ဟိုလျှောက်ပွား ဒီလျှောက်ပွားနဲ. မိုးရွာလာတော့ စက်တွေ ရေစိုကုန်မှ ပြာယီးပြာယာ လိုက်ရွှေ.ရတယ် ဟိဟိဟိ…
တော်တေးတာပေါ့.. ကိုချိုကြီး ၀ါယာလက်မိုက်လေးကယ်လို.. နို.မို.ဆို.. မိုက်ပြသနာ ထပ်ဖြစ်အုံးမယ်.. ဟိဟိ ဦးမိုက် ဟုတ်ဘူးနော်. မိုက်ပြသနာဆိုတာ…
kai says: .. သွေးသွားစစ်ထားတာမှာ.. သွေးထဲ.. ဆီပါတာလည်းများနေသတဲ့..
ပြန်စဉ်းစားတော့.. စားလာတာ.. ဆီမပါတဲ့ဟင်းမပါတဲ့နေ့.. မရှိသလောက်…။
( ဂျပန်မှာနေတဲ့.. ဆယ်စုနှစ်ကတော့.. ဆီလွတ်တော်တော်များခဲ့ပါတယ်..)
ဒို့မြန်မာတွေ.. အစားအသောက်စားပုံ ပြန်(ပြန်) ပြင်သင့်ပြီလား…
(ဂဇက်ဝါးတီး.. လေကန်ဝေဖန်အမှတ်တရ..) Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
အရီးခင်လတ် says: ဒါကြောင့် ကျော တာ အယုံကြဘူး။
ဟင်းချက် မကောင်း တဲ့ မိန်းမ တစ်ယောက် ကို ယူရင် အဲဒီ ဆီပြသနာ အန္တရာယ်ဘယ်တော့ မှ မဖြစ်စေရဘူး။
သူတို့က ဘယ်တော့ မှ ဆီသတ်မချက်ဘဲ ရေလုံဘဲ ပြုတ် အလွယ်ချက် လို့။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5027
Mr. MarGa says: ဟဲဟဲ
ဘူဖေး ဆိုတော့ ရှေ့ဆုံးကနေ တန်းစီတာကို ရိုက်မထားလို့
ဦးမျိုးသန့်တို့ ရှေ့ဆုံး ရောက်သွားတယ် ဟီဟိ
အလင်း ဆက် says: အရင် တစ်ခေါက် တွေ့ဆုံပွဲ ထက်
ပိုပြီးလည်း ရင်းနှီးလာကြသလိုပဲမို့ 
ပျော်စရာ အမှတ်တရ နေ့ တွေရဲ့
ထိပ်ဆုံးက နေ့ တစ်နေ့ပါပဲ
ဦးကျောက်ခဲ says: ဒီတစ်ပွဲ မောင်ကျောက် ဟီးမတိုက်လိုက်ရလို့ တင်းတယ် အကိုမိုက်ရေ…
Ma Ei says: ကျောက်ရှိရင် အတော်ပိုပျော်ရမှာလို့
kyeemite says: ကျုပ်ကလည်း ဘိုကျောက်စ်ကိုပါစေချင်တာဗျ..
ရွဲစီ၊ အာဂ၊ ကိုသုဝေတို့နဲ့ တိတ်တိတ်ကလေး ဘီဘီသွားချလိုက်သေးတယ်
အဲတော့ပိုသတိရသွားတာပေါ့ဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 437
ကိုသု says: အဲဒါကြောင့်လဲ အဝေးမြင်ကွင်းလေးဆိုတဲ့ ပုံကောင်းတစ်ပုံထွက်လာတာပေါ့ဗျာ (မှတ်ချက်- ကျွန်တော်တို့ တတက်စားလဲကြက်သွန် နှစ်တက်စားလဲကြက်သွန် ဟုသတ်မှတ်၍ချနေသော ဘီဘီဝိုင်းမှ လှမ်းရိုက်ချင်း)
KZ says: အဲ။ ဟီးဟီးးးး
ပို့(စ) ထဲမှာ အနော်ကို အဲလို ပြောတော့ရှက်လိုက်တာ။ (တကယ်တော့မရှက်ပါဘူးးး) ကိုယ်ဝါသနာပါရာ ကိုယ် မေးမိတာပါ။
အနော်သာဆို အစားအသောက်တစ်ခုချင်းဆီကို ရိုက်ဦးမှာ။ ခွိခွိခွိ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုကြီးမိုက် ရိုက်လာတော့ ကြည့်ရသေးတာပေါ့ရယ်။
ဒါနဲ့ အောက်ဆုံးက ဒုတ်ချင်မင်းဒါး တွေလားးးးး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2223
ရွှေတိုက်စိုး says: ဟယ်ကြည့်စမ်း… အန်တီကေဂျက်က သိပ်မျောက်စိ လျင်တာပဲ… အလယ်က အင်္ကျီအဖြူနဲ.က ဒုတ်ချင်မင်းဒါး မင်းမော်ဂွန်း လေ……..
ကျန်တဲ့ မျက်မှန်နဲ.က မှန်ထိုး နဲ. နောက်တစ်ယောက်က စက်ကိုင်လေး…………ခွိခွိခွိ
KZ says: မင်းဒမီးပါဘူးရားးးး
မင်းမော်ကွန်း အရပ်ကို မှီတဲ့ မင်းဒမီး ရှိဘူးထင်ဒယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 6551
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အလယ်က အိန်းဂျီအဖြူနဲ့က ဒုတ်ချင်မင်းဒါး မီဟုတ်ဘူး ..
တားတား ဒက်ဒီဂျ .. မှတ်ထား ..
တားဂဒေါ့ ညှစ်စနိုးနဲ့ ဒက်ဒက်တိုက် လို့ ခေါ်ဒလယ် .. သိရား .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လေနဲ့လာ လေနဲ့လွဲ လေနဲ့လွတ်နေတဲ့ ကိုပေါက် ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ပြန်သနားမိပါ၏
Min Zarni says: သွားလေသူအဘိုးဗိုလ်ချုပ် ရယ်… အမျိုးတွေကလေ ဆီတွေ သိပ်စားတာပဲ..
ရွာစားကျော် မင်းနန္ဓာ says: မိုက်ကော ခဲ ခဲ့ရသေးသလား ခမီးခမက်ဂျီး.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: ဒီတစ်ခေါက်တော့ ရွှေတိုက်ကိုပဲ မိုက် အပီးပေးထားလိုက်တယ်..
Yin Nyine Nway says: လာချင်တာ
ဗိုက်နဲ့ မိုးနဲ့ …. ကိုချေက ပေးမသွားတော့
အတိုးနဲ့ 3ယောက်စာ လာစားတော့မယ် …
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 178
ဦး ကြိမ် says: ဆုံဖူးချင်ပါတယ်……….တနေ့နေ့တော့……….။
အရီးခင်လတ် says: အစားအသောက်ကိစ္စကို စိတ်ဝင်စားတာဒေါ်ကေဇီ တင် မက သူ့ အရီး ပါ ပါပါတယ်။
အင်မတန် အရသာရှိတဲ့ စာလေးတွေ ကို စားသွားပါကြောင်း။
ကျေးဇူးပါ ခန့်ညား ချောမော လှပါသော ကကြီးမိုက် ခင်ဗျား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12402
KZ says: ခွိ။
တရုတ်စာချင်းတူရင်ကို ကိုယ့်နိုင်ငံက တရုတ်စာက ပိုကောင်းတယ်မှတ်တာပဲ။
ခုပဲပြန်ကြည့်ပြီး ပုစွန်ချိုချဉ်ကြော်မစားရတာ ဘယ် နှစ်နှစ်ရှိပြီလည်း ပြန်တွက်နေတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: ကိုခင်လတ်ကြီးပြန်ရောက်ရင် တွေ့ဆုံပွဲတစ်ပွဲလုပ်မယ်လေ….
ကုန်ကျစရိတ်တော့ အရံခီး နော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
အရီးခင်လတ် says: ကျုပ်ကလဲ တွေ့ချင်ပါ့ဗျား။
RIT ကျောင်းကန်တီး မှာ ကျွေးမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4670
ခင် ခ says: RIT ကျောင်းကန်တီးက ဟိုးအရင်တုန်းကလို ဈေးမသေးတော့ဘူးနော်။
သူလည်း အပြင်ဆိုင်တွေနဲ့ တန်းတူယူနေပြီ အရီးရေ။
kyeemite says: ဂွတ်တာပေါ့ဗျာ..ကျနော်တို့ ၈၅ဘက်ခ်ျတွေ တခါတလေဆုံချင်ရင်
အဲဒီကင်တီးမှာပဲ ချိန်းပြီးတွေ့ကြတယ်.. အခုကျောင်းတော်ကြီးလဲ
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: သွား အအေးပက်လာဒေါ့
ဟို … သူဘုံဂျီး တို့နဲ့ သွားရောပလိုက်ရောလားဟင်င်င် .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: ဟီဟိ..ဒီလိုပဲလုပ်လိုက်ရတော့တာပေါ့..အံစာရယ် Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ဂဇက်ပွဲက ပုံတွေနဲ့ သွားတိုက်ဆေးကြော်ငြာရမယ်။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1880
ကိုရင်စည်သူ says: တား နောက်လ ပြန်လာလို့ တီးမတိုက်တဲ့ အူးကြီးမိုက်ကို တားသိပ်မုန်းပလိုက်မှာပဲ မေမေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
kyeemite says: ဟဲဟဲ..လာရင်သာဆက်သွယ်လိုက်ပါကရင်စည်ရယ်..
သောက်ချင်တာသောက် သိပ်မပေါက်နဲ့ပေါ့..ဟိ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 4116
Foreign Resident says: အစား အသောက် တွေ ကောင်းတာကို ထောက်ခံပါတယ် ။
ကျနော် ကတော့ ဆီနဲနဲ နှင့် ခြောက်ခြောက်လေး ကြော်ထားတဲ့ ၊
သက်သတ်လွတ် အသီးအရွက် ထမင်းကြော် ကို အမှတ်ပြည့် ပေးမိပါတယ် ။
luu noutlay says: အစားအသောက်တွေကအတော်စားလို့ ကောင်းမှာပဲနော်………ဟိဟိ
kyaw swar kaung says: ပျော်စရာလဲ ကောင်းပါပေ့
ကင်မရာပါရက်နဲ့ သတိမရနိုင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့.. ဘူဖေးစားပွဲထိပ်ကများ..နေရာဦးထားလို့မအားတာလားဗျာ..။
နောက် ကိုမိုက်ကို မေးရဦးမယ်..
လမ်းဆက်လျှောက်နေမယ့် ကြီးမိုက် ဆိုတော့..
ဘယ်နေ့ များ ခြေထောက်ညောင်းပြီး ထိုင်ဘို့ စိတ်ကူးထားလဲ..
ကျနော် ကိုမိုက်နဲ့ ဘီဘီ ဖြစ်ဖြစ် လဘက်ရည် ဖြစ်ဖြစ် တ၀ိုင်းထဲ ထိုင်သောက်ချင်လို့ ပါ..။။
ကြီးမှဘဲ မိုက်မိုက် ငယ်ကတည်းကဘဲ မိုက်မိုက်…
မိုက်တဲ့သူနဲ့ မိတ်ဆွေဖြစ်လဲ မဆိုးဘူး… ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ခင်တဲ့
kyeemite says: ကိုကျော်စွာခေါင်ရေ..
“ကင်မရာပါရက်နဲ့ သတိမရနိုင်ဖြစ်နေတာဆိုတော့.. ဘူဖေးစားပွဲထိပ်ကများ..နေရာဦးထားလို့”
ပဲ အစီအစဉ်ကို မီးစင်ကြည့်လုပ်သွားတာမို့ပါ) ။ နောက် ကိုမိုက်ကို မေးရဦးမယ်..
ဒါကတော့ ဘ၀ပေးလို့ပြောရမှာပဲဗျ…. ညောင်းလဲ ထိုင်လို့မဖြစ်သေးဘူးဗျ…
ဘ၀လမ်းကိုတော့ ထာဝရလမ်းဆက်လျှောက်နေရအုံးမှာပဲ.. ကျနော်လည်းခင်တတ်ပါတယ်ဗျာ..ရန်ကုန်ပြန်ရောက်ရင်သာ
Phoe Kaung says: Very Good Events!!!
lu lu says: ပျော်စရာအရမ်းကောင်းမှာပဲနော်
နောက် တခါတွေ လုလု လည်းကြုံဖူးချင် တယ်
kyeemite says: လုပ်တဲ့ပွဲတိုင်း တစ်ရွာလုံးကိုဖိတ်တာပါ လုလုရေ..
လာဖို့သာကြိုးစားပါနော…၀ဲလ်ကမ်းပါ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.